मन्त्री लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय गायब ! - inaruwaonline.com
मन्त्री लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय गायब !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २२, २०७४ समय: ८:५७:३१
काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गरेकै दिन एमालेका लोकप्रिय नेता लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भए ।कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले उपत्यकामा मुख छोपेर हिँड्ने दिनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । लगत्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको भन्दै विभिन्न उद्योग र कम्पनीलाई जरिमाना पनि तिराए ।
पदभार ग्रहणलगत्तै सकारात्मक चर्चा बटुलेका मन्त्री पण्डित सोमबार पनि मन्त्रालयकै काममा व्यस्त थिए । तर, उनी व्यस्त रहेको मन्त्रालय भने अहिले अस्तित्वमै छैन ।सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १७ मा झारेपछि उनले सम्हालिरहेको मन्त्रालयको अस्तित्व नै सकिएको छ । वातावरण वन मन्त्रालयमा र जनसंख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिएर उनको कार्यकक्ष छेउकै भवनमा नयाँ बोर्ड आइसकेको छ ।
तर, पण्डित भने सरकारले आफ्ना लागि मन्त्रालय नतोकेपछि अस्तित्वमै नरहेको मन्त्रालयको बोर्ड भएको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको ‘नेमप्लेट’ राखेर काम गरिरहेका छन् ।अहिलेसम्म मन्त्री पण्डितको नयाँ कार्यविभाजनअनुसारको मन्त्रालय तोकिएको छैन । पण्डित सम्हालिरहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको नाम छ । तर, उनको मन्त्रालय दुईतिर परिसकेको छ । मन्त्रालय नभए पनि उनी सोमबार लामो समय कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेका थिए ।
यसअघि कायम उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मातृका यादवले सम्हालिसकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा समेत सो कार्यविभाजन भने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयकै पहिलो पत्रमा भने उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहेको उल्लेख छ । मन्त्री पण्डितलाई भने अझै जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा चिनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली स्वीकृत गरिसकेपछि नेपालमा जनसंख्या तथा वातावरण नामको कुनै मन्त्रालय नै छैन ।
मन्त्री पण्डितले भने आफूले नयाँ कार्यविभाजनअनुसारको मन्त्रालय नपाएसम्म पुरानै कार्यविभाजन अनुसारै काम गरिरहने बताए । यस्तो अवस्थामा संगठन संरचना तयार नहुन्जेलका लागि मन्त्रालय भिन्नभिन्न ठाउँमा भए पनि मन्त्री पण्डितले भने पुरानै मन्त्रालय रहेको भवनबाट काम गरिरहेको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिले वन मन्त्रालय बसेको भवनबाहिर वन तथा वातावरण मन्त्रालय नामकरण गरिसकिएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बोर्ड राखिसकिएको छ । अहिलेको कार्यसम्पादन भने पुरानै संरचनामा पुरानै मन्त्रालयको नामबाट सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको भए पनि संगठन संरचना तयार भइनसकेको कारणले अहिले पुरानै प्रक्रियाअनुसार काम चलिरहेको जानकारी दिइन् । उनले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका कर्मचारीबीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिइन् ।
बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म सबै काम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयकै ‘लेटरहेड’मा भइरहेको छ । यी दुवै जिम्मेवारी वन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि कर्मचारीहरू पनि वन र जनसंख्यामा बाँडिएर जाने जानकारी बस्नेतले दिइन् । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सोमबारसम्म मन्त्रालयको संगठन संरचना तयार पार्न समयावधि तोकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबीच यस विषयमा समन्वय
भइरहेको बताए । विभिन्न सचिवले पेस गरेको संगठन संरचनाको विषयमा व्यापक छलफल गरी त्यसलाई पारित गराउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।